‘घाँटी भन्दा तल त राम्री नै छे’ को प्रचार गर्दा केकीलाई यति ठुलो फसाद ?? - Nepal Insider
Home/मनोरंजन/‘घाँटी भन्दा तल त राम्री नै छे’ को प्रचार गर्दा केकीलाई यति ठुलो फसाद ??
‘घाँटी भन्दा तल त राम्री नै छे’ को प्रचार गर्दा केकीलाई यति ठुलो फसाद ??
महिला हिंसाको बिरोधमा सधैँजसो आवाज उठाउँदै आएकी अभिनेत्रीमा पर्छिन् केकी अधिकारी । सोहि कारण पनि धेरैले उनलाई प्रशंसा गर्दै आएका छन् । तर, अहिले आएर उनि एउटा सानो गल्तीका कारण ठुलो लफडामा तानिएकी छिन् ।
एक हप्ताअघि आर्जन पाण्डेले अभिनय गरेको गीत केकीले आफ्नो अफिसियल पेजमा शेयर गरेकी थिइन् । पाण्डे केकीका निकै नजिकका साथि (वजारमा चलेअनुसार अघोषित प्रेमी) हुन् । उनले अभिनय गरेको गीत ‘घाँटी भन्दा तल त राम्री नै छे’ हो । सो गीतमा मोडल छिन्, केकीको नजिकका साथी रिमा विश्वकर्मा र आर्जन । रिमा पनि महिला हिंसाका विषयमा पटक–पटक आवाज उठाउने अभिनेत्रीमा पर्छिन् । गीत अहिलेपनि युट्युवमा पाइन्छ
रिमाले आफ्नो फेसबुकदेखि हटाएपनि केकी र आर्जनको फेसवुकमा भने यथावत छ । खासमा उक्त गीतका शव्दहरुले महिलालाई होच्याउने, र तल पार्न खोजेको भन्दै धेरैले महिलाको अपमान गरेकोले उक्त गीत तुरुन्तै हटाइनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सामाजिक सन्जालमा निकै विरोध भैरहेको छ ।
गीतको विरोध गर्नेमा दर्शक मात्रै छैनन्, कलाकारहरु पनि छन् । गायिका आस्था राउत, संगीतकार चेतन सापकोटा, निर्मल शर्मा, दिपकराज गिरी, पत्रकार डब्बु क्षेत्री लगायत धेरैले गीतको चर्को विरोध गरेका छन्, केकी तथा रिमाको पनि उत्तिकै आलोचना भैरहेको छ । प्रतीक पौडेलको म्युजिकमा आर्जन आफैले स्वर दिएको
सामाजिक सन्जालमा चर्को आलोचना भैरहेपनि आर्जन, केकी, रीमा कसैले आफ्नो धारणा राखेका छैनन् । प्रतीक पौडेलको म्युजिकमा आर्जन आफैले स्वर दिएको उक्त गीत अहिलेसम्म १ लाख २७ हजारले हेरेका छन् । युट्युवमा आएका अधिकांश कमेन्टले गालि मात्रै गरिएको छ । राम्रो प्रशंसा भेट्टाउन गाह्रै पर्छ ।